မြန်မာတိုရဲ့ပင်လယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြန်မာတိုရဲ့ပင်လယ်
Posted by thaung htutsoe on Feb 4, 2013 in Creative Writing | 11 comments
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက လူသားတွေဟာ ပင်လယ်သမုဒရာအတွင်းသို့ စွန့်စွန်းစားစားသွားခဲ့ ကြပါ တယ်။ အဲဒီလိုသွားလာခဲ့သော်လည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ သွားလာမနေကြပဲ နောင်လာနောင်သားများအတွက် မိမိတို့ ရောက်ရှိခဲ့သောနေရာများကို သင်္ကေတပေါင်းများစွာဖြင့် အမှတ်အသားပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရေပုံဟု (မြေပြင်မှာတော့ မြေပုံပေါ့) ပေါ်ပေါက်လာကာ ယနေ့ခေတ်ပင်လယ်ပြင်သွားလာမှုအတွက် များစွာအ ထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ရေပုံ မြေပုံများရေးဆွဲလာနိုင်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံအလိုက် မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သော ရေပြင်မြေပြင်များကို မှတ်သား တိုင်းတာလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နတ်မြစ်ဝမှ ၀ိတိုရိယအငူ(ကော့သောင်း)အထိ မိုင်ပေါင်း(၁၃၈၅)ခန့် ရှည်လျားပြီး ကမ်းနီးရေတိမ်ပိုင်း စတုရန်းမိုင်ပေါင်း (၈၂၂၀၀)ကျယ်ဝန်းသည့် မြန်မာ့ပင်လယ်ဟု ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိ လာပါတယ်။
ကမာကြီး၏ လေးပုံသုံးပုံခန့်(သို့)ကမာမျက်နှာပြင် (၇၁%)က ရေထုဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ သုတေသန ပညာရှင်များ၏ လေ့လာချက်များအရ ပင်လယ်ရေ တစ်ကုဗမိုင်ကို ကျိုချက်ပါက အိမ်းသုံးဆားတန်ချိန် (၁၂၀) ရရှိနိုင်တယ်ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှ ဆားသာမက အခြားအဖိုးထိုက်တန်သော ရတနာများလည်းရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ- လေယာဉ်နှင့် အာကာသယာဉ်များ၏ ကိုယ်ထည်များတည်ဆောက် ရာတွင် အသုံးပြုသည့် မဂနီဆီယမ်သတုများအပြင် ကယ်လဆီယမ် ကာဗွန်နိတ်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ သတု၊ ရေနံ၊သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး၊ စထရွန်တီယမ်နှင့် ယူရေနီယမ် တို့ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့အဏ၀ါမှာ ဓါတ်သတုများသာမက သက်ရှိသတ၀ါမျိုးပေါင်း(၃၀၀၀၀)ခန့် ရှိနေပေရာ ငါးသတ၀ါသည် လူသားတို့၏ နေ့စဉ်စားသောက်ဖွယ်ရာများမှ ဟင်းလျာအဖြင့်တည်ရှိနေခြင်းကြောင့် စီးပွားဖြစ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများပေါ်ပေါက်လာကာ ပြည်သူပိုင်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဟု ၁၉၆၅-၁၉၆၆ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး ကမ်းနီး ငါးဖမ်းသင်္ဘော(၂၈)စီးနှင့် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းသင်္ဘော(၁)စီးဖြင့်သာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၉-၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံခြားမှ ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ မှာယူတင်သွင်းခဲ့သောကြောင့် ကမ်းနီးငါးဖမ်းသင်္ဘော(၉၅)စီးနှင့် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းသင်္ဘော(၅)စီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုမူကား ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းသင်္ဘေများ မြောက်များစွာရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ ပြည် သူပိုင်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို ပြည်သူ့ ပုလဲနှင့်ငါးလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်းဟုပြောင်လဲလိုက်ပြီး ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ကိုအမှီပြုပြီး ဖြတ်သန်းသွားလာ ကုန်သွယ်မှုပြုနေကြသော နိုင်ငံရပ်ခြား ကုန် သွယ်ရေယာဉ်များလည်း မြောက်များစွာရှိလာပြီး ကုန်သွယ်မှုအခန်းကဏ္ဍလည်း တိုးတက်မြင့်မားလာပါတယ်။ တိုင်း ပြည်တစ်ပြည်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် စီးပွားရေးမဏ္ဍိုင်ပေါ်တွင် လုံးဝတည်ရှိပေရာ စီးပွားရေးအခြေခံအုပ်မြစ်ခိုင်မာ ရေးအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှုပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် ရေလမ်း သွားလာမှုသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုမျှအဖိုးအနဂထိုက်တန်လှသော ကျွန်တော်တို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ပိုင် အဏ၀ါရေပြင်အား တိုင်းသူပြည်သားတိုင်း ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ် ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျကိုပေးလိုက်ရတာတွေအတွက်ကိုလည်း တိုင်းသူပြည်သားတွေအနေနဲ့ ကာကွယ်ချင်ပေမယ့် အစိုးရတောင်မတတ်နိုင်တော့ ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပဲ ရင်နာနာနဲ့ပဲ…….
ကျွန်တော်က လူသစ်ဆိုတော့ စပါယ်က ပထမဆုံး(ပထမဆုံး) ကွန်မန့်ပါဗျာ
နောင်ကာလတွေမှာလည်း ကျွန်တော် Mandalay Gazette အဖွဲ့သားများနဲ့ များစွာပူးပေါင်းသွားမှာပါ
ဘယ်လိုများ လေ့လာပါသလဲ ကိုယ့်လူ..
ဒို့များ တော့.. . .. gazette ထဲဝင်လို့သာ ဖတ်ရတယ်.. အပြင်ဆို အဲသာမျိုး တအားပျင်း..
ခုလိုကျတော့ လည်း ဖတ်ကောင်းတယ်ဗျို့.. နောက်ဆို မပျင်းဘဲ ဖတ်နိုင်အောင် လုပ်တော့ မယ်ဗျာ..
အားပေးတယ်.. ကိုသောင်းထွဋ်ဆွေ ရေ… ဒို့လည်း လူသစ်ပါပဲ..
အဲ.. မှားလို့.. ကိုသောင်းထွဋ်စိုး..
ဗမာ့ရေတပ်မတော်ရဲ့ တာဝန်လို့ မြင်မိပါတယ်
ရွာသားအသစ်ကလေးဆိုတော့ မင်္ဂလာပါ။ ကျိုစိုပါဒယ်နော။
ပိုစ်လေးက ဗဟုသုတ ဖြစ်စေပါတယ်နော။ ဘာမှမပြောတတ်လို့
ငါ့တို့ နိုင်ငံပိုင် ရေပြင်ကို ဘယ်သူမှ မထိနဲ့ …
ထိရင် မီးပွင့်သွားမယ် .. ဒါဗျဲ ….
မေခလာ နတ်သမီး လင်ဒေါ်မောင်
အဲဒီလို ဗဟုသုတ ပို့စ်လေးနဲ့အစချီလာတဲ့ ရွာသားအသစ်ကို
ဦးကြောင်ကို ငုတ်တုတ်ထားပြီး လူသစ်ကို ကြိုဆိုပါတယ် ပြောတော့ ဗုံဗုံက ဦးကြောင်ကို မုန်းပီလား…။
ကိုသောင်းထွဋ်စိုးက ပုလဲနဲ့ငါးလုပ်ငန်းက ထင်တယ်နော်။ ရေသူမအကြောင်း သိရင် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရေးပြပါအုံး။